မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်တွေအရ အခုလာမယ့် ရွေးကောက် ပွဲမှာ လွတ်လပ်မျှတမှုရှိမယ့် သဘောလက္ခဏာနဲ့ အရိပ်အယောင် တစုံတရာ တွေ့ရပါ သလားလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မေးမြန်းခဲ့တော့ ပြောခွင့်ရပုဂိုလ် ပီဂျေ ခရော်လီရဲ့ ဖြေကြားချက်က ရှင်းပါတယ်။ လွတ်လပ်မျှတမှု အရိပ်အယောင် လုံးဝ မမျှတပါဘူးလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြား ဝန်ကြီးဌာနက ပြောခဲ့ သလိုပဲ ကုလသမဂ၊ ဥရောပနဲ့ အိမ်နီးချင်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်း အလားတူ စိုရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ် မှောက် ဆန့်ကျင်နေသူများသာမက ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်ပါတီတွေကပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကော် မရှင်ရဲ့ တင်းကြပ်မှုတွေ၊ အခွင့်အရေး မမျှတမှုတွေကို ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကနေ လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူ နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့  မြန်မာ့အရေး သုတေသီ ဒေါက်တာဇာနည်ကို ဦးသန်းလွင်ထွန်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပါဝင်ခွင့်မရအောင် ဥပဒေအရ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပါဝင်ခွင့်မရအောင် ဥပဒေအရ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနှစ် (၂၀) လောက် ညစ်လိုက်တာ အဲဒါထက် ရှင်းတာမရှိတော့ဘူး။ အဲဒါကတော့ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလိုပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း။ အနှစ် (၂၀) လောက်က တပြည်လုံးက တပ်မတော်သားတွေ အပါအဝင် မဲပေးပြီး နောက်ဖွဲ့မယ့် အစိုးရ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို လုံးဝ ပါဝင်ခွင့်မပေးဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စကားပြောဖို့ နေနေသာသာ လွတ်ပေးဖို့လည်း ဆန္ဒမရှိဘူး။ နောက်တခါ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဌေးကြွယ်တို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမား ၂၁၀၀ ကျော်က ပါလီမန်မှာ ဝင်ပြီးတော့ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ အဲဒီ (၃) ချက်ကို ထောက်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲက ဘယ်လိုမှ စတောင်မစရသေးဘူး မမျှတာဘူးဆိုတာ သိသာတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒေါက်တာဇာနည် ထောက်ပြတဲ့အချက်က အားလုံးပါဝင် ပြိုင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့် ထောက်ပြနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ ဝင်ပြီးတော့ ပါဝင်ဖို့၊ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ တားစူနေကြတဲ့ ဝင်မယ့်ပါတီတွေအနေနဲ့ သူတို့အပေါ် ဘယ်လိုမမျှတမှုတွေ၊ အခု မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်တွေမှာ မမျှတမှုတွေ ဘာတွေမြင်နေရသလဲဆိုတာကို တချက်လောက် ပြောပြပါ။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ ဒါ စလာကတည်းက ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြေးကစပြီး ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာက လူတော်တော်များများက စီးပွားရေး အဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်၊ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်လာ (၅၀၀) လောက်ပေးမှ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ ဒါ-စကတည်းက ဒါကို ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကပဲ။ ဆိုလိုတာက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပိုက်ဆံကို ဗုန်းပေါလအော သုံးပြီးတော့ လုပ်နိုင်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကလွဲလို့ရှိရင် ကျန်တဲ့လူ ဘယ်လိုမှ ဝင်လို့မရအောင် လုပ်ထားတယ်။ မ. ဆ. လ လက်ထက်က ခိုးထားတဲ့လူတွေကတော့ NUP ထဲမှာရှိတယ်။ ဒီလူတွေကတော့ မ. ဆ. လ လက်ထက်က ခိုးထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ဝင်နိုင်တာ ပေါ့။ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အတွက် နိုင်ငံရေးကို ဝင်ပါချင်တဲ့လူ၊ boycott လူတွေတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ NDF တို့၊ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းနုတို့အဖွဲ့ထဲမှာတောင်မှ အားလုံးပေါင်းမှ လူ (၂၀၀) ကျော်လောက်ပဲ ဝင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ တမင် ငွေအင်အားနဲ့ ဝင်ပါလာတဲ့လူ သူတို့လမ်းကြောင်းထဲကို လိုက်လာတဲ့လူတောင်မှ ငွေအင်အားနဲ့ ဖိပြီးတော့ သတ်တဲ့သဘောပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ဓနအင်အား၊ နောက်ပြီးတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အင်အားတွေက ကွာခြားနေတာကို ဒေါက်တာဇာနည်က ထောက်ပြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကနေပြီးတော့ အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်း လိုက်ပြီးတော့ ရှိရှိသမျှ စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေးအင်အားနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို သုံးစွဲပြီးတော့ အခု မဲဆွယ်ပွဲတွေ လုပ်နေတဲ့အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခု ဒေါက်တာဇာနည်တို့ ရှိနေတဲ့ ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့လူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းမှာရော ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အထိ မကျေမနပ် ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေသလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် တရားဝင် ဒီကိစ္စမျိုးတွေကို ကန့်ကွက်မှုတွေ ရှိလာမလားလို့ ထင်သလား။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ ကျနော်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံက ကန့်ကွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဘယ်မှာသွားပြီး ကန့်ကွက်မှာလဲ။ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတန်းစား၊ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေက မျှော့ကြိုးလိုလုပ်ပြီး သုံးနေတယ်။ အာဏာရှိတဲ့လူအတွက် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေ။ နောက်တခါ တရားခုံရုံးလို နေရာမျိုးမှာ သွားပြီးတော့ တိုင်မယ် တန်းမယ်ဆိုလို့ ရှိရင်လည်း တရားသူကြီး ဆိုတာ ကလည်း စစ်ဗိုလ်တွေပြောသမျှ လိုက်လုပ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ သူတို့က ဘာမှ တရားမျှမျှတတ လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ လုပ်မယ်ဆိုလို့ ရှိရင်လဲ အာဆီယံ အဖွဲ့အစည်းမှာ သွားပြောရင် အာဆီယံကလည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲဆိုတော့ အာဆီယံထဲမှာလည်း ဘယ်နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ရှိလို့လဲ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်သူတွေက မကျေနပ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ပွစိပွစိ ပြောမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ဆန္ဒပြမယ်။ ဒီလောက်ပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာလည်း ဒီကိစ္စကို လုပ်ဖို့လို့ရှိရင် UN က ဘန်ကီးမွန်းက ဘယ်လောက်ပြောပြော။ ဘန်ကီးမွန်းရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်ကိုတောင်မှ ဗမာပြည်ဗီဇာ ရအောင်လို့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိဘူး။ ကျနော်ဆိုလိုတာက ဘယ်လောက်ပဲ မတရားတာကို ပြည်သူတွေက မကျေနပ် မကျေနပ် ကမ္ဘာမှာ တင်ပြရင်လည်း ဘယ်သူကမှ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမပေးနိုင်ဘူး။ အထဲမှာ တရားခုံရုံးကလည်း မျှမျှတတ ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမရှိဘူး။
စစ်ဗိုလ်တွေ၊ အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကလည်း မတရားဘူးဆိုတော့ ကျနော်ထင်တယ်၊ ပြည်သူကတော့ ဒါကို တော်လှန်ရေးတရပ်အဖြစ် ပါဝင်ပြီးတော့ ဂျပန်ခေတ်ကလို၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလို ဂျပန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်သလို အားလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အနောက်မှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး လုပ်ချင်လုပ်။ မလုပ်လို့ရှိရင် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူအတွက်ကတော့ ပြာပုံထဲမှာပဲ ဆက်ပြီးထားမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်တယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကလည်း တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အတော်လေး စိုးရိမ်မှု တွေ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ လေ့လာမှုအတွက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်ပေးဖို့ နောက်ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေလည်း ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဗမာပြည်သွားပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ တရားမျှတလာအောင် အားလုံး ကူညီမှု တွေ လုပ်ပေးချင်ပါတယ်လို့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒါကိုတောင်မှ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းမှာ ပြည်တွင်းရေးကို ကိုယ့်ဘာသာ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပြောပြီး ပယ်ချလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကို ပယ်ချနေတယ်ဆိုလို့ ရှိရင် ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ မပါဘဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခုကို တရားမျှတအောင်၊ တရားမျှတပါတယ် ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာသိ ကြေညာလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာကို မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ သဘောမပေါက်ဘူးလား။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ သူတို့ ပေါက်ချင်လည်း ပေါက်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူတွေက သူတို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတာ အနှစ် (၅၀) ကျော်လည်း ရှိနေပြီ။ နောက်တခု ကျနော်ပြောချင်တာက ဆုံးသွားတဲ့ သမိုင်းဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောသလို သမိုင်းကို မသိလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေက ပိုပြီး အ သွားမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီ စစ်တပ်ရဲ့ အနှစ် (၅၀) သမိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာ ဘယ်နှစ်ခါ ရှိပြီလဲ။ လေးကြိမ် ရှိခဲ့ပြီ။ ၁၉၆၀ ဦးနု လက်ထက်က ဆွေငြိမ်း - နုတင် ကိစ္စကလည်း ဦးအောင်ရွှေ တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်တို့၊ အန်အယ်လ်ဒီ လုပ်တဲ့ ဦးအောင်ရွှေ တို့ကိုယ်တိုင်က ဝင်ပြီးတော့ ညစ်ဖို့ကြိုးစားတာ။ အဲဒီမှာ ဆွေငြိမ်းလည်း ရှုံးသွားတော့ မောင်နေဝင်းက ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးမောင်မောင်တို့ကို သူမပါတဲ့ ပုံစံမျိုး မဲထဲမှာ ဝင်ယုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကန်ထုတ်လိုက် တယ်။ နောက် ၁၉၆၂ မှာလည်း ပြည်သူက မဲပေးလိုက်လို့ နိုင်လာတဲ့ ဦးနုအစိုးရကို အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။ ပြည်သူရဲ့ မဲဆန္ဒကို စစ်တပ်မှာလုပ်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ပြည်သူရဲ့ မဲပြားကို လုံးဝမလေးစားတာက နှစ် (၅၀) ရှိပြီ။ နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဆိုရင် ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ဦးနေဝင်းကြီး တပါတီထဲမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာတောင်မှ တကယ်တမ်း ရွေးလိုက် တဲ့အခါကျတော့ ဦးကျော်စိုး၊ ဦးစန်းယုတို့ သူ့အထက်မှ ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ဦးနေဝင်းက တပါတီစနစ်အတွင်းမှာတောင် မဲလိမ် တယ်။
၁၉၉၀ မှာ ပြည်သူက အန်အယ်လ်ဒီ တခုလုံးကို လုံးဝ မဲပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါကို ပြည်သူပေးလိုက်တဲ့ မဲပြားကို စစ်ဗိုလ်တွေ မလေးစားတာ နှစ် (၅၀) ရှိပြီ။ နောက်ထပ် နှစ် (၅၀) ရှိရင်လည်း ဒီမောင်တွေက လေးစားဖို့ အလားအလာ မရှိဘူး။ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အနေအထားတွေ၊ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ ဥပဒေကို မလေးစားဘဲ လုပ်တာကို ကြည့်ရင် ဒီမောင်တွေက ဆက်ငြင်းမှာ။ ဒါကို ကျနော်တို့က သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီလို အခြေအနေမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ မမျှတမှန်းကို ပေါ်လွှင်နေရက်နဲ့ ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နောက်ပိုင်း တကယ်လို့ အခြေအနေပေးလို့ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် နောက်ပိုင်း ဘယ်လို အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ အလွန်တရာ ဖိနှိပ်မှုကိုသုံးပြီး နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်တပ်က လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ စစ်တပ်အစိုးရက လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပါလီမန်ထဲမှာ ဒီလူတွေ သတ္တိရှိလာပြီး ပြည်သူဘက်က ရပ်ဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံး ကျနော်ပြောမယ်။ မ. ဆ. လ ခေတ် တုန်းက ဆိုရှယ်လစ်ပါလီမန် အမတ်တွေက ဦးနေဝင်းနဲ့ စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ မရိုသေ့စကားပြောတယ်။ ကြောက်လွန်းလို့ သေးပေါက် သွားရမှာကို သေးပေါက်မသွားဘဲ ပိုးလုံချည်ထဲမှာ သေးထိုင်ပေါက်ပြီး ဒီ မ. ဆ. လ စနစ်ကြီး ဇာတ်မျောသွားတာ နောက်လာမယ့် ပါလီမန်ကလည်း ဒီထက်ကောင်းစရာ အလားအလာမရှိဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒေါက်တာဇာနည်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို လူပုဂ္ဂိုလ်အရေးကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဥပဒေကြောင်းအရ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်တွေအရ နောက်ပေါ်လာမယ့် ပါလီမန်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကို ကောင်းလာအောင် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာ အောင် လုပ်လာနိုင်မယ့် အထောက်အထားတွေ မရှိဘူးလား။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ မရှိဘူးခင်များ။ ဒီနေ့ပဲ အင်ဒိုးနီးရှားဘက်က ကျနော့်မိတ်ဆွေ ပညာရှင်တွေနဲ့ စကားပြောတယ်။ ဒီ ၁၉၉၇-၉၈ နောက်ပိုင်း ဆူဟာတို နိုင်ငံရေးထဲက ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ ပြည်သူက ဝိုင်းပြီးဆန္ဒပြပြီးတော့ စစ်တပ်ထဲက ကောင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ ပြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ အင်အားစုတွေ အထူးသဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအဖွဲ့က ဝိုင်းပြီးတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဆူဟာတို ပြုတ်ကျသွားတယ်။ နောက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ စစ်တပ်က တဖြည်းဖြည်းချင်း သူ့ရဲ့ကဏ္ဍကို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးတွေထဲမှာ မှေးမှိန်အောင် စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ဦးဆောင်ပြီး လုပ်သွားလို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက လူမှန်နေရာမှန် သဘောမျိုး၊ စစ်သားဟာ သူ့အလုပ်သူလုပ်တဲ့ အနေအထားမျိုး။ နိုင်ငံကလည်း ဦးမော့လာတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်လာတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုယ်တိုင်က စစ်ဗိုလ်တွေကို ပစ္စေကဗုဒ္ဓအဆင့်မှာ ရေးထားပြီးတော့ ကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့ တောင်အာဖရိကမှာ ပေါ်ခဲ့တဲ့ လူဖြူလူမဲ ခွဲခြားတဲ့သဘော။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ အသားအရောင် မဟုတ် ဘူး။ စစ်ဘောင်းဘီ ဝတ်ထားတဲ့လူက ထာဝရ ထိပ်တန်းမှာရှိပြီးတော့ ကျန်တဲ့လူတွေက လယ်သမား၊ ပညာရှင်တွေဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောမွဲ သမားဖြစ်ဖြစ်၊ မြို့နေလက်လုပ်လက်စားဖြစ်ဖြစ် စစ်ဗိုလ်စစ်သားကလွဲရင် ကျန်တဲ့လူတွေက ဒုတိယတန်းစား အဆင့်မှာရှိတဲ့ စနစ်မျိုးကို သွားနေတော့ ကျနော်တို့က အင်ဒိုနီးရှားလိုတောင်မှ အနှစ် (၁၀) နှစ် (၁၅) နှစ်အတွင်းမှာ ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်ချက် ထားလို့မရဘူး။ ဆိုလိုတာက လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လူတွေက ဘုရင့်နောင်၊ ကျန်စစ်သား၊ အနော်ရထာ၊ အလောင်းဘုရားတို့ ခေတ်ကိုသွားနေတဲ့ ပဒေသရာဇ်ဆန်ဆန် စစ်ဘုရင်ပုံစံတွေ လုပ်နေတာ။ ဒီမိုကရေစီလမ်းနဲ့ ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အားလုံး သဘောပေါက်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ အခုလောလောဆယ် ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေကတဆင့် လူသိရှင်ကြား ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမပေးဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့် ရှိပေမယ့် မဲမပေးဘူးဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ လူထုကြားမှာ ဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်မလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူထုကြားထဲမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို သွားမဲမပေးလို့ရှိရင် အရေးယူခံရနိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့အတွက် တစုံတရာ ပြဿနာပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး စိုရိမ်မှုတွေ ရှိနေကြတယ်။ အခုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောကြားချက်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ လူထု ကြားမှာ ဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်မှု ရှိနေသလဲ။
ဒေါက်တာဇာနည် ။ ။ ကျနော်ထင်တယ်၊ လူထုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ ဌေးကြွယ်၊ မင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုဇာဂနာတို့ ဒီလူတွေ အကုန်လုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တဦးတည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ထောင်ကျနေတဲ့လူတွေ၊ တောထဲမှာရှိတဲလူတွေ ဒီလူတွေ အကုန်လုံးက ဒီရွေးကောက်ပွဲက စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ပြည်သူကို စစ်ကျွန်ဘဝမှာ နောက်ထပ် နှစ် (၅၀) နှစ် (၁၀၀) ထပ်ရှိစေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ မို့ သူတို့က လုံးဝ မထောက်ခံပါဘူး။ သူတို့ရဲ့  ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးကို သုံးပြီး ဆန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတာကို ပြောတဲ့ အခါမှာ ပြည်သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်က နမူနာချပြတဲ့ အမူအယာမျိုးကို ယုံကြည်လို့ရှိရင် လိုက်ပေါ့။ ကြောက်တယ် မကြောက်ဘူး။ တနိုင်လုံးမှာ လူတထောင်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လို မဲမပေးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်လို့ ရှိရင် လူတထောင်ကို ဆွဲမှာပေါ့။ အကယ်၍ လူတသန်းက မဲမပေးဘူးဆိုရင် လူတသန်း ချနိုင်တဲ့ ထောင်မရှိဘူး။ သန်းခြောက်ဆယ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ သန်း (၂၀) က မဲမပေးဘူးဆိုရင် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲက ပျက်ပြီ။ ဒီလူတွေကတော့ ညစ်မှာ။
နာဂစ်ကာလမှာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူတွေသေလိုက်တာ ဝက်ဝက်ကွဲနေပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ၉၉.၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြည်သူက ထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီး ညစ်တာ။ လိမ်တာက သူတို့အလုပ်။ လိမ်တာကို လက်မခံတာက ပြည်သူအလုပ်။ ကြောက်ရမှာက အစိုးရမဟုတ်ဘူး၊ ကြောက်ရမှာက ဘုရားစကားလိုပေါ့၊ မတရားတာကို လုပ်ရမှာ၊ မတရားတာကို မြင်ရဲ့ သားနဲ့ ခေါင်းငုံ့ပြီးနေတာကို ကြောက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။